တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာနဝနျကွီး H.E. Smt. Sushma Swaraj အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
မေ ၁၁၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
နေပြည်တော်၊ မေ ၁၁
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Smt. Sushma Swaraj အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့်တပ်မတော် အရာရှိ ကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Shri Vikram Misri၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြည်းတပ်စစ်သံမှူး၊ ရေတပ်စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-အိန္ဒိယနှစ် နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်း နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ နှင့် သမိုင်းနောက်ခံအကြောင်း အရာများတူညီမှုရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့်များစွာဆက်စပ်မှုများရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသည် အတိတ်ကာလကတည်းက နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင် များ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း ဦးစွာပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာနှစ်ကာလကြာမြင့်စွာကပင်ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများရှိကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အရှေ့မျှော်မူဝါဒအရ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း အိမ်နီးနားချင်း ဦးစားပေးအနေဖြင့် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို မိမိတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် ထောက်ခံအားပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက် ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်မှန်များအား နိုင်ငံတကာမှသိရှိစေရေးအတွက် မိမိတို့အနေဖြင့်တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်၌လျှောက်လှမ်းနေမှုတွင် တပ်မတော်မှပါဝင် ဆောင် ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတွင် နှစ်ဘက်တပ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် နယ်မြေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် ဆက်လက်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မှုအခြေ အနေများ၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တစ်ဘက်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများပြန်လည် လက်ခံရေးတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှု၊ ရခိုင်ဒေသ ဖြစ် စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားမှုရှိရန်အရေးကြီးမှု၊ အခြေအနေမှန်များကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက မိတ်ဆွေနိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံတကာသိရှိအောင်အသိပေးရှင်းလင်း ပြောကြားပေးမည့်အခြေအနေများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ သညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာန ၀နျကွီး H.E. Smt. Sushma Swaraj အား ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့တပျမတျော အရာရှိ ကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာန ၀နျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Shri Vikram Misri၊ အိန်ဒိယနိုငျငံကွညျးတပျစဈသံမှူး၊ ရတေပျစဈသံမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ-အိန်ဒိယနှဈ နှဈနိုငျငံသညျ အိမျနီးခငျြးကောငျး နိုငျငံမြားဖွဈပွီး မိတျဆှဟေောငျး၊ မိတျဆှကေောငျး နိုငျငံမြားဖွဈကွောငျး၊ ယဉျကြေးမှု၊ ကိုးကှယျသညျ့ ဘာသာ နှငျ့ သမိုငျးနောကျခံအကွောငျး အရာမြားတူညီမှုရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ဖွဈပျေါပွောငျးလဲမှုမြားသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ နှငျ့မြားစှာဆကျစပျမှုမြားရှိကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံသညျ အတိတျကာလကတညျးက နှဈနိုငျငံနှငျ့ နှဈနိုငျငံခေါငျးဆောငျ မြား ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာနထေိုငျခဲ့ကွကွောငျး ဦးစှာပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးမှာနှဈကာလကွာမွငျ့စှာကပငျကောငျးမှနျသညျ့ ဆကျဆံရေးရှိကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ဒီမိုကရစေီပွုပွငျပွောငျးလဲရေးလုပျငနျးမြားတှငျ ကူညီဆောငျရှကျပေးမှုမြားရှိကွောငျး၊ မိမိတို့နိုငျငံ၏ အရှမြေှ့ျောမူဝါဒအရ မွနျမာနိုငျငံကိုလညျး အိမျနီးနားခငျြး ဦးစားပေးအနဖွေငျ့ ဆကျဆံဆောငျရှကျပေးနကွေောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ဖွဈပျေါတိုးတကျပွောငျးလဲမှုမြားနှငျ့ ဆောငျရှကျခကျြမြားကို မိမိတို့အိန်ဒိယနိုငျငံအနဖွေငျ့ ထောကျခံအားပေးလကျြရှိကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျ ပိုငျး၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျမှနျမြားအား နိုငျငံတကာမှသိရှိစရေေးအတှကျ မိမိတို့အနဖွေငျ့တတျနိုငျသညျ့ဘကျမှ ဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ မွနျမာနိုငျငံ၏ဒီမိုကရစေီလမျးကွောငျးပျေါ၌လြှောကျလှမျးနမှေုတှငျ တပျမတျောမှပါဝငျ ဆောငျ ရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတှငျ နှဈဘကျတပျမြားပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဖွငျ့ နယျမွေ တညျငွိမျအေးခမျြးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ ဆကျလကျ၍ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ လိုအပျမှုအခွေ အနမြေား၊ နယျစပျဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ အခွားကိစ်စရပျမြားတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့အခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ တဈဘကျနိုငျငံသို့ထှကျခှာသှားသညျ့ ဘင်ျဂါလီလူမြိုးမြားပွနျလညျ လကျခံရေးတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံမှပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေု၊ ရခိုငျဒသေ ဖွဈ စဉျမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ နိုငျငံတကာအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏အခြုပျအခွာအာဏာကို လေးစားမှုရှိရနျအရေးကွီးမှု၊ အခွအေနမှေနျမြားကို အိန်ဒိယနိုငျငံက မိတျဆှနေိုငျငံမြားနှငျ့နိုငျငံတကာသိရှိအောငျအသိပေးရှငျးလငျး ပွောကွားပေးမညျ့အခွအေနမြေား၊ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးအတှကျ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရနျကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာန ၀နျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ၊ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာန၊ ဝနျကွီး H.E. Smt. Sushma Swaraj ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား လကျခံတှဆေုံ့
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ပုသိမျတပျနယျနှငျ့ မွောငျးမွတပျနယျမြား အား လှညျ့လညျကွညျ့ရှုစဈဆေး
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မဟာသရစေညျသူ မငျးအောငျလှိုငျ တပျမတျောသူနာပွုနှငျ့ဆေးဘကျပညာသိပ်ပံဘှဲ့ သငျတနျးအမှတျစဉျ(၁၅)နှငျ့ အမြိုးသမီးသူနာပွုသိပ်ပံဘှဲ့သငျတနျးအမှတျစဉျ(၂) သငျတနျးဆငျး ဂုဏျပွုစဈရေးပွအခမျးအနားသို့ တကျရောကျမိနျ့ခှနျးပွောကွား